Guddoomiyaha Gobolka Mandheera oo codsaday kulan lagu xaliyo shaqaaqooyinka qabiilada xuduudka isaga gudba - Sabahionline.com
Guddoomiyaha Gobolka Mandheera oo codsaday kulan lagu xaliyo shaqaaqooyinka qabiilada xuduudka isaga gudba
Waxaa qoray Bosire Boniface oo Gaarisa jooga
Maajo 21, 2013
Iyada oo shaqaaqooyin aad u xun ay bilawdeen ayaa madax ka socota Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku ballansanaayeen in ay Talaadada (Maajo 21-deeda) yimaadaan Gobolka Mandheera si ay uga wada xaajoodaan sidii loo horjoogsan lahaa in aysan isku dhacyada qabiiladu u gudbin meelaha ay saddexda waddan isaga yimaadan.
Qoysas isugu yimid xerada booliiska ee Rhamu ee Gobolka Mandheera ka dib markii ay barakiciyeen rabshado dhex maray qabiilada Dagoodiyaha iyo Garaha oo dhacay Febraayo 28-deedii. [Bosire Boniface/Sabahi]
Godoomiye goboleedyada Kenya oo qaadanaya qoondaynta shaqada si loo yareeyo khilaafka qabiilka
Dawlada Kenya oo lagu dhalleeceeyay in ay si gaabis ah uga jawaabto dagaallada qabaa'ilka
Kenya oo ku hanjabtay in ay awood u isticmaali doonto colaadaha qabaliga ah
Khilaafka qabiilada ayaa ahaa kuwo sanado badan aaggaas ka jiray, marmarka qaarkoodna ay noqonayeen kuwo xuduudka ka gudba, laakiin laga bilaabo Maajo 10-keedii ayay ku sii bateen Gobolka Mandheera, kuwaas oo ay ku dhinteen 14 qof, dhaawacayna 39 qof, sidoo kalena barakiciyay in ka badan 4,000 oo qof, madaxda ayaa sidaas leh.
Ka dib markii isku dhac khasaare weyn gaystay uu dhex maray qabiilada Dagoodiyaha iyo Garaha ayaa Kenya ay gaysay ciidamo gobolka si ay hubka uga dhigaan maleeshiyaad soo duulay oo la rumaysan yahay in ay ka yimaadeen Itoobiya.
Usbuucii hore, ayaa koox hubaysan oo la rumaysan yahay in ay Itoobiya ka yimaadeen soo weerareen aagga Malkamau ee Gobolka Mandheera, kuwaas oo weerar aargoosasho ah ku dilay saddex haween ah oo ka tirsan qabiilka Dagoodiyaha shan kalena dhaawacay, Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Cali Ibraahim Roba ayaa sidaas yidhi.
Axaddii, qawlaysato aan u aabayeelin ammaankii la xoojiyay, ayaa dilay laba qof afar kalena ku dhaawacay xaalado kala gadisan oo ka dhacay cidhifka dambe ee gobolka ee Deegaanka Banisa.
Dhammaynta khilaafaadka qabiilka
Roba ayaa sheegay in isaga iyo maamulaha gobolka ay ku marti qaadeen madaxda iyo hoggaamiye qabiileedka Itoobiya iyo Soomaaliya shir la qorsheeyay in uu qabsoomo Arbacada ilaa Jimcaha si looga wada shaqeeyo dhamaystirka khilaafaadka qabiilka.
"Wax macno ah ma samaynayso in Kenya ay dadaallo iyada ku eg samayso si nabad loo raadiyo iyada oo isla markaana qabiilada isku dagaalsan Mandheera ay sidoo kale joogaan Itoobiya iyo Soomaaliya," ayuu u sheegay Sabahi.
Hoggaamiyeyaasha gobollada dariska ah ee Wajeer iyo Gaarisa ayaa iyaguna ka qayb galaya dhexdhexaadinta heshiiska nabadeed, ayuu yidhi.
Wareeggii ugu dambeeyay ee dagaallada u dhexeeya qabiillada Dagoodiyaha iyo Garaha ee Gobolka Mandheeraa ayaa u gudbay qabiilada dhinaca kale xuduudka ka deggan ee Itoobiya, ayuu yidhi Roba, isaga oo intaas ku daray in maleeshiyooyinka labada dhinacba ay ku dhex jireen weeraro aar goosi ah. Qabiilka Murale ayaa sanado badan khilaaf kala dhaxeeyay qabiilka Garaha, taas soo keentay boqolaal dhimasho ah.
Si loo helo xal waara, ayaa Roba wuxuu sheegay in maamulka Gobolka Mandheera uu qabiilada oo dhan ka qayb galin doono fursadaha horumarinta iyo shaqooyinka.
"Sida caadiga ah in badan dhibaatooyinkan waxaa huriya dareen ah in hal qabiil aan laga qayb galinin ama aan lala wadaagin khayraadka, waxanaan bilawnay in aan arrintaas ku saxno in aan qof walba ka qayb galino," ayuu yidhi.
Roba ayaa sheegay in ay tahay in shacabka ayaagoo raali ka ah ay qaataan cafiska dawlada ayna soo wareejiyaan hubka ay haystaan ee sharci darrada ah.
Sida laga soo xigtay Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Michael Tialal, illaa Jimcihii hore waxay shacabku soo dhiibeen 18 qori iyo in ka badan 600 oo rasaas ah iyaga oo aqbalay cafiska ay dawladdu u fidisay.
Wuxuu sheegay in ka qayb galayaasha shirku ay ka wada hadli doonaan in la wadaago arrimaha sirdoonka ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa dadka laga shakisan yahay si loo joojiyo dilka. Haddii ay suurta gal tahayna, Kenya iyo Itoobiya ayaa isku waafaqaya hab hub ka dhigis ah si dadka ka cararaya hal waddan aysan gabbaad uga helin waddanka kale, Tialal ayaa sidaas yidhi.
Sanadkii 2005, ayay Ciidamada Difaaca Kenya ka bilaabeen hawlgal hub ka dhigis ah Mandheera, laakiin ma aysan guulaysanin ka dib markii boqolaal dad ah ay ula carareen Itoobiya iyo Kenya qoryahoodii, ayuu yidhi.
Sidaas darteed, ayaa shirka usbuucan uu ka hadlayaa sidii la isaga kaashan lahaa xakamaynta hubka saddexdan xuduudood, ayuu u sheegay Sabahi.
Qabaailka ayaa wadaaga diin, dhaqan iyo hab nololeed
Dagaallada qabiilka ee Gobolka Mandheera ayaa inta badan ka kaca iska horimaad xagga siyaasadda ah iyo u tartan dhinaca kahyraadka sida dhulka daaqa oo kale iyo biyaha xilliga abaarta ah, ayuu yidhi.
"Waxaan doonaynaa in dadku ay si nabad ah u wada noolaadaan ayna wadaagan khayraadka markaas yaala," Tialal ayaa sidaas yidhi. "Waxaa muhiim ah in dadku ay fahmaan in ay wadaagaan hal diin, dhaqan iyo hab nololeed."
Safiirka Itoobiya u jooga Kenya Shamsudin Axmed Rooble ayaa u sheegay Sabahi in waddankiisa ay ka go'antahay ammaan waara oo xuduudka ah.
"Waxaan nagu dhacay rabshado in nagu filan oo ka soo butaacay Kenya. Waxaa naga go'an in aan shaqaaqooyinka dhammayno xidhiidhka labada waddan ka dhexeeyana xoojino si horumarku uu u taabo galo," ayuu yidhi.
Madaxda gobollada Itoobiya ee xadka la leh Kenya ayaa ka codsaday shacabka maxalliga ah in ay joojiyaan weerarrada xuduudka, Rooble ayaa sidaas sheegay.
Xabiiba Xujaale, oo ah 25 jir deggan Gobolka Mandheera, ayaa sheegtay in wada hadalka xuduuduha xal dhexdhexaad ah laga gaadhi doono si loo heshiisiiyo qabaailka is laynaya.
"Oday dhaqameedyadu waa in ay hubiyaan in heshiiska la gaadhay la ixtiraamo qabiiladooduna ay fuliyaan," ayay tidhi.
May 19, 2014 @ 03:43:31PM
Waxan rajaynaynaa fikrada ugu wacan
December 9, 2013 @ 12:25:22PM
Sidaasi way xuntahay
December 5, 2013 @ 11:50:04PM
Waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu duqa u naxariisto. Wuxuu ahaa libaaxii Africa.
May 22, 2013 @ 01:27:24PM
waxaan leeyahay waa in dhinac kastaa uu nabad ku baaqaa, waana inay sidaa yeelaan dhamaan dadyowga ku nool itoobiya iyo soomaaliya iyo dalkayga aan jecelahay ee Kenya. Waxaa muhiimad wayni ku jirtaa in shaqooyin laga abuuro dhamaan bulshooyinka arrinku khuseeyo, iyadoo aan loo aabayeelin heerka tacliineed ee uu qofku gaadhay. Waxaan ugu baaqayaa xukuumadaha dhamaantood inay keenaan mabda’ muhiim ah, kaasoo ah in dadka dhamaantood laga qayb galiyo dibu dhiska dhaqankii burburay ee ay lahaan jireen dhamaan qabaa’ilka ku nool koonfurta dalka itoobiya, halkaasoo ahayd meeshii uu boqor Xayle Salaase uga dagaalamay xornimada dhamaan dalalka afrikaanka ah gudo iyo dibadba. Waxaynu haysanaa khayraad farabadan, markaa aynu ka faa’idaysano khayraadkaas dhamaanteen.